Heno ihany koa fa nihazo iny toerana iny omaly ny kandidan’ny antoko politika Kintana, Tabera Randriamanantsoa sy ny an’ny FMI Ma, Jean Jacques Ratsietison. Marina fa hankalazaina ao an-toerana manomboka anio ny taom-baovao Malagasy iraisan’ny rehetra fa ny mahagaga saika tsy solontena toy ny teo aloha loatra intsony no alefan’ireo kandida fa dia izy tenany mihitsy no lasa midina any an-toerana ankehitriny. Tao Fianarantsoa koa, raha tsiahivina, no nanambaran’ny kandida Joseph Martin Randriamampionona na Dadafara, tamin’ny fomba ofisialy ny filatsahany hofidiana filoham-pirenena. Ampahany ihany ireo fa hatreto dia efa saika nandalo tao avokoa ny ankamaroan’ireo kandida tao anatin’izao fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana izao. Malaza ho be mponina sy miray hina rahateo i Fianarantsoa.